Ixabiso eliphantsi kwi-Intanethi kwi-Bachelors Degree yaMazwe ngaMazwe naBafundi baseKhaya 2022
Molweni nonke, namhlanje ndifuna ukuthetha ngesidanga se-bachelors esinexabiso eliphantsi esifumaneka kubo bobabini abafundi abanqwenela ukufunda phesheya nabo bafunda kwilizwe labo.
isidanga sebhatshela linqanaba elisisiseko wonke umntu afuna ukulifumana njengoko lisisiqinisekiso sobungqina bokuba ubenemfundo yaseyunivesithi kwaye ikwayimfuneko yokuqhubela phambili imfundo yakho, nkqu nokufumana isidanga sokufundisa.
Inye into elungileyo malunga nokufumana isidanga se-bachelor kwi-Intanethi kukuba ikuvumela ukuba uyonwabele intuthuzelo yelizwe lakho ngelixa ufundela isidanga esivela kwelinye ilizwe. Ngale ndlela unokufumana izidanga ezimbini kwi-Intanethi ekuhambeni.
Owona mceli mngeni mkhulu ekufumaneni izidanga zamanye amazwe I-intanethi yimirhumo, iifizi zihlala zoyikisa kodwa ngolwazi oluchanekileyo unokuhlala kwiiyunivesithi ezaziwayo phesheya ezingayi kunqumla intloko yakho ngaphambi kokuba zikunike isidanga kwi-intanethi.
Ezi yunivesithi nangona iifizi zazo ziphantsi zisamkelwa kwilizwe liphela kwaye iinkqubo zazo zesidanga zihamba ngeendlela ezahlukeneyo.
Apha, ndiza kugxila kwiinkqubo zesidanga se-Intanethi eziphakathi kweenkqubo zesidanga esinexabiso eliphantsi onokuzifumana kwihlabathi liphela.
Ukulinganiswa kwam kweenkqubo zesidanga esinexabiso eliphantsi kwi-intanethi ziya kusekelwa kwimali yokufunda eyunivesithi enikezela ngerhafu yenkqubo ngeyure nganye yokuthenga ngetyala.
Isifundo ngetyala lethu kwezi nkqubo ze-onlie zezokuchonga isixa ekuya kufuneka umntu asichithe ukufumana isiqinisekiso sedigri.
Ndiza kugxila kwiinkqubo ezintlanu zesidanga se-bachelor esitsho, ezona zi-5 zibiza ngeyona nkqubo inexabiso eliphantsi kwi-intanethi phakathi kwabanye.
Elona xabiso liphantsi kwi-Intanethi
(1). Inkqubo ye- KwiYunivesithi yaseCumberlands ukubonelela ngeenkqubo zesidanga esinexabiso eliphantsi kwiinkalo ezininzi kubandakanya itekhnoloji, izifundo zonqulo, ishishini, kunye nemfundo, zibiza a Izifundo ngeyure nganye yokuthenga ngetyala eyi- $ 199. Le yenye yexabiso eliphantsi kwihlabathi liphela kwaye umfundi akadingi kutyelela isikolo ngaso nasiphi na isizathu ngaphambi kokufumana isiqinisekiso sakhe.
(2). Inkqubo ye- Ikholeji yoNxweme lwaseGeorgia Ukubonelela ngeenkqubo ezifikelelekayo zesidanga se-Intanethi kwicandelo lolawulo lwabasebenzi kunye nobunkokeli, ulwimi lwesiFrentshi kunye noncwadi, kunye nolawulo olungenzi nzuzo kunye nokuhlawulisa izifundo ngeyure nganye yokuthenga ngetyala nge- $ 136 nje.
(3). Inkqubo ye- IYunivesithi yase-Valley City State-Edwardsville Ukunikezela ngesidanga se-bachelors esinexabiso eliphantsi kwicandelo lomculo, imfundo yetekhnoloji, ulawulo lokudityaniswa kweshishini, kunye nesayensi yezentlalo kunye neFundo ngeYure nganye yeTyala kwi $ 177. Ezinye zeenkqubo zingafuna ukuba abafundi batyelele isikolo kube kanye ngexeshana kodwa kungabi njalo.
(4). Inkqubo ye- Georgia University University sesinye sezidanga ze-bachelors ezisezantsi kwi-Intanethi ezibonelela ngezikolo emhlabeni. Iirhafu eziphantsi zokufunda kwi-intanethi kwizifundo ezinje ngokuba ngumongikazi ziye zamkelwa kakhulu.
Nangona abo babonelela ngeenkqubo zokonga kwezinye iimeko kufuneka ukuba bathathe iiseshoni zokuphila ukuze bancede bakhulise ukuqonda. Iyunivesithi iyangxolisa isifundo ngeyure nganye ngetyala le- $ 204.
(5). Inkqubo ye- KwiYunivesithi yase-Arkansas State Ukubonelela ngaphezulu kwe-11 yeeprogram ze-bachelors ze-intanethi ezihamba kwiinkalo ezahlukeneyo phakathi kweeyunivesithi zehlabathi kunye neerhafu eziphantsi kakhulu kwiiprogram ze-bachelors degree.
Ngesifundo ngeyure nganye yokuthenga ngetyala eyi- $ 210, iyunivesithi ibonelela ngesatifikethi sedigri ye-bachelors kubafundi bamanye amazwe nabasekhaya abafaka izicelo kwaye bagqibezele naziphi na iinkqubo zesidanga esikwi-Intanethi abazibonelelayo.
Ukuba njengamazwe aphesheya okanye mhlawumbi abafundi basekhaya ujonge iinkqubo zesidanga esinexabiso eliphantsi ezibonelela ngokuguquguquka kunye nethuba lokufumana isidanga kwi-Intanethi ngelixa usebenza tolo okanye mhlawumbi uye kwezinye iiprojekthi zobuqu ke olu luhlu kufuneka lube sisiqalo sakho a eyunivesithi eyaziwayo kwi-Intanethi ukukhangela.
izidanga ezingabiziesona sidanga sitshiphuIxabiso eliphantsi kwi-intanethiIxabiso eliphantsi kwi-intanethiIxabiso eliphantsi kwi-intanethiizidanga eziphantsiIsidanga se-bachelors esikwi-intanethiizidanga online kwixabiso eliphantsiizidanga online
Post Previous:I-8 esisiseko sokuFunda kwelinye ilizwe Iimfuno zaBafundi beZizwe
Okulandelayo Post:Ufunda njani eCanada ngaphandle kwe-IELTS, GMAT, Fumana iVisa yabafundi kunye nokuSebenza nawo
Pingback: Amanyathelo ama-5 okufumana isiDanga seMasters ngaphandle kweBachelors 2021